Shirweynaha Badqabka Fikirka iyo la dagaallanka Xagjirnimada oo galay maalintiisa labaad – Walaal24 Newss
April 30, 2019	Off	By walaal24
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa shalay shirka furay, Waxaana ka soo qeybgalay 12 wakiillo dowladeed oo xubno ka ah Ururka OIC, 30 caalim oo ka socda wadamada Islaamka iyo 12 ka mid ah culimada diinta iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed.
Waxaa lagu wadaa in maanta oo Talaado ah lagu soo gaba-gabeynayaa Caasimadda Muqdisho Shirweynaha Badqabka Fikirka iyo la dagaallanka Xagjirnimada oo ay qaban-qaabisay Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, maalgeliyayna Ururka Iskaashiga Islaamka.
Ra’iisul wasaare kuxigeenka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa shalay hadalkiisa diiradda ku saarray dhex dhexaadnimada diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed ee ka beermay nabadda iyo deganaanshaha, isagoo tilmaamay in rabshadda, argagaxisada iyo isqarxinta aanay ahayn wax laga yaqaan Soomaaliya, balse ay tahay aragti wax burburin oo dibadda laga soo minguuriyay.
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Mudane Cabdulqaadir Axmed-kheyr Cabdi oo isna shirkan ka hadlay ayaa sheegay in shir noocaan ah oo ku qabsooma Muqdisho ay tahay guul taariikheed oo dhiirrigelinaysa nabadda iyo dadaallada lagu doonayo in looga takhaluso rabshadda, xagjirnimada iyo argagaxisada.
Wasiiru dowlaha Diinta iyo Awqaafta, Mudane Cabdishakuur Xasan Ashkir iyo Mudane Danjire Askar Mussinov oo ah Madaxa Wafdiga Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa waxa ay shirka ka jeediyeen laba khudbadood, iyadoo shirku galay dhowr fadhi oo furan oo toos looga baahiyay telefishannada iyo warbaahinta bulshada.
Shirkan oo maanta la soo gaba-gabeynayo ayaa laga soo saari doono Qodobo ku aadan Badqabka Fikirka iyo la dagaallanka Xagjirnimada taas oo Soomaaliya iyo Gobolka intiisa kalaba muhiim u ah.
Midowga Yurub oo kordhiyay cunaqabateynta dhanka Hubka saarneyd wadanka Mayanmar
Maxkamadda Gobolka Banaadir oo Xukun dil ah ku riday eedeysanayaal loo heystay Dadkii dilay Axmed Dowlo
Wasiir Maareye oo furay shir la xiriiray dhaqan gelinta istiraatiijiyadda wacyigelineed ee qaranka
Madaxweyne Farmaajoiyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada Rome ee Dalka Talyaaniga
Qarax Miino oo lagu dilay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeele
Sawiro: Maxakamadda Darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka sida oo xukun ku riday labo ka tirsan kooxda Alshabaab
Dhageyso: Ciidamada Booliiska oo gacanta ku soo dhigay Rag dhac ka geysanayay Suuqa Bakaaraha
Dhageyso: Baarlamanka Galmudug oo maanta ansixiyay in magalada Cadaado aytahay Xarunta Barlamaanka Galmudug
Dhageyso: Guddiga Dastuurka Aqalka Sarre oo la kulmay wafdi ka socda Midowga Yurub
Daawo: Madaxweyne Dani “Shirkadaha in ay san marmarsiinyo u noqon karin in ay maalgashiga Puntland uga baaqdan Al-shabaab iyo Daacish”
Daawo: Madaxweyne Muuse Biixi “waxaana Dalalka u taajirsan una hormarsan Dalka leh Bad weyn oo ILAAHEY nasiibka u siiyo Soomaliland waxay leedahay Bad weyn”
Daawo: Gudomiyaha Gobolka Banaadir oo amar ku bixiyay in la baneeyo Dhulka danta Guud
Daawo: Ra’iisul wasaraha oo xerada qaybta 21aad ku booqday Ciidamo ka tirsan Ahlu suna oo lagu wareejiyey Dowladda Federaalka